Ahoana ny fomba famoronana sary misy fehezan-teny manome aingam-panahy na fanaovana collage | Famoronana an-tserasera
Mamorona sary mitambatra
Laura Carro | | Fitaovana famolavolana, Inspiration, Photoshop
Amin'ity lesona ity dia hianarantsika mamafy sary sahaza azy avy amin'ny rakitra iray ary apetaho amin'ny rakitra hafa, sns mahazoa firafitra mahafinaritra. Avy eo isika dia afaka mamorona sary manentana, miaraka amina andiam-panahy manentana ny saina, na collage tsotra iray izay mahatsapa ho tsara tarehy eo imasony.
Androany izao hanombohana mamokatra ny antony manosika antsika manokana, jereo ity tutorial tutorial ity.
Hanombohana, amin'ny Photoshop dia tsy maintsy manana ny sary roa (na mihoatra) tiantsika hiasa.
Ny dingana manaraka dia misy kitiho ny fitaovana fifantina Mahatsapa ho mahazo aina kokoa izahay, raha ny tena izy dia nisafidy ilay fitaovana izahay ny resaka majika satria ny sarinay manana fanamiana ary mora esorina ny mombamomba azy. Miankina amin'ny sary nofidinao dia ho mora kokoa na ho sarotra kokoa izany, fa amin'ny faharetana dia azonao foana izany.
Raha manana tahirim-bola toa ny anay ianao dia vao mainka izahay milaza izany aminao fandeferana manome ny fifantenana ianao, tsara kokoa aminao izany. Toy izany koa, raha esorintsika eo amin'ilay boaty izay milaza azy io "mifanila"Mandritra ny fotoana isafidianantsika ny loko tadiavintsika, dia ho tonga eo amin'ny haben'ny loko mitovy aminy misaraka aminy io.
Raha mila misafidy toerana iray isika dia afaka mampiasa ny lakile fanovana toy ny hitsin-dàlana for manampy safidy hafa. Raha tsy izany, raha tiantsika esory ny zavatra tsy tokony hofidintsika, dia hampiasa ny lakile isika Alt amin'ny fotoana fikitihana.
Koa satria eto isika dia mifantina ny ambadika, ary izay tiana hampiasaina dia ireo litera, avy eo dia ampiasainay ilay baiko Ctrl + Shit + I hampiodina ny safidinao, na tsy mahomby izany, ao amin'ny vakizoro Selection-Invert.
Farany dia adikao izy (Ctrl + c) ary apetaho amin'ny sary hafa (Ctrl + v)
Raha vao apetaka amin'ny sary iray ny sary iray dia azontsika apetraka amin'ny toerana tena tiantsika indrindra amin'ny tsindry sy fisarihana.
Araka ny hitanao, indraindray rehefa misy sary eo afovoan'ny loko mitovy amin'izany dia very izy. Mba hamahana ity olana kely ity manana hafetsena hafa haingana isika raha te hanome anao antsipiriany fanampiny izahay, ary de ho hita misimisy kokoa.
kevitra tsindrio indroa amin'ny sosona sary te-hanitsy izahay, hiseho ny pop-up misy safidy maro hanampy. Amin'ity tranga ity dia hampiasa ny safidy izahay Outer Glow. Avelantsika ho banga ny loko mamirapiratra, ary hanitatra azy, araka ny hita eo amin'ny pikantsary. Vitantsika izany tsara kokoa ny mamaky ny lahatsoratra amin'ny sary, ary ho setrin'izany dia hifantoka amin'izany isika.
Anjaranao izao ny mamorona sary manaitaitra anao manokana!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Mamorona sary mitambatra
Asongadino ny singa iray amin'ny sary sisa
Amboary ny sary misy ny vokan'ny Shadow / Highlight